Ku Soo Dhawaada Wargeyska Dalka » WARARKA
WARARKA MAANTA 17ka Oktoobar 2018 Sir Culus!
Su’aalaha Maanta: Maxay xukuummadda fashilantay ee uu hoggaaminaayo khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” u gashay xukuummadda ugu musuqmaasuqa badan adduunka 2017 Iyo 2018 sida ku qoran bogga hay’adda ladagaalanka musuqmaasuqa adduunka ee Transparency International? Maxayse tahay sababata uu khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” uga baxay siyaaasaddii dhexdhexaadka ee arrimaha dibadda taasoo dhigaysay in dalka Soomaaliya u kala eexan waddamada Carabta sida #Sacuudiga, #Qatar #Turkiga, #Imaaraadka iyo iwm? Maxaa $ 200 milyan ee Dowladda #Qatar ka fiicnaatay $ 80 milyan ee Sacuudiga ballanqaadeen? Mise Ma waxuu rabaa khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” in #Turkiga asagana xiriir ka loo jaro sida ay u wada khaldan yihiin? Maxaa khaldan siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya oo shaqsiyaad aan wax aqoon iyo waayo-aragnimo u lahayn ay sida ay rabaan ugu tumanayaan? Maxayse labada Guddoomiyayaal ee kan Aqalka Hoose Mudane Mursal Iyo kan Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi uga hadli layihiin khaladaadka siyaasadda arrimaha dibadda ee ay ku kacaysi xukuummadda fashilantay ee khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade? Maxuuse uga aamusan yahay inuu wax ka qabto Madaxweyne Mudane Maxamed Cabdilaahi Farnaajo “Been-Hawaas” oo hadda si fiican u ogaaday khaladaadka dadban ee uu ku kacay ama sameeyey khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” kuwaasoo la xiirar siyaasadda ariimaha dibadda ee dalka Soomaaliya? Yaa maanta Ummadda Soomaaliyeed been u sheegi kara?
Afrkcom 17ka Oktoobar 2018 Militariga Mareykanka ayaa Talaadadii maanta ku dhawaaqay weerarkii ugu weynaa ku dhawaad sanad oo ay duqeyn ku dilaan 60 dagaalyahan oo ka tirsan Ururka Al-shabaab. Taliska Mareykanka ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay Jimihii ina dhaafay meel u dhaw degmada Xarardheere ee gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya, lama sheegin rayid wax ku noqday duqeyntan.
Wuxuu ahaa weerarkii ugu cuslaa oo ay fuliyaan militariga Mareykanka tan iyo wixii ka danbeeyay 21 Nov ee sanadkii 2017 oo duqeyn lagu dilay 100 dagaalyahano ka tirsanaa Ururka Al-shabaab.
Warka ka soo baxay taliska Mareykanka laguma faah faahin cida lagu bartilmaameedsanayay weerarkan ay ku dhinteen 60 ka dagaalyahan ee ka tirsanaa Ururka Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa 14kii bishan October xustay sanad guuradii ka soo wareegatay Qaraxii ba’naa ee ka dhacay Isgoyska Soobbe ee magaalada Muqdisho kaa oo ay ku dhinteen dad ku dhaw 700 ruux oo u badnaa dad rayid ah.
Al-shabaab wali wax war ah kama aysan soo saarin sheegashada Mareykanka ee ah duqeynta ka dhacday degmada Harardheere.
Muqdisho 17ka Oktoobar 2018 Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay ilaa saddex ruux oo qeyb ka ahaa dilkii iyo gubistii marxuum Axmed Mukhtaar Saalax Dowlo oo bishii hore lagu dilay goobtiisa shaqada.
newsinisde Guddoomiyaha gobolka Banaadir Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow ayaa sheegay in la soo xiray saddex ruux oo ku eedeysan in ay gacan weyn ku lahaayeen dilka marxuumka iyo dabkii la qabadsiiyay intaba.
Marxuumka oo lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa sababta loo bartilmaameedsaday lagu sheegay arrimo la xiriira Heeb Sooc ‘’Guur’’ kaddib markii uu wiil uu adeer u yahay uu guursaday Gabar ka soo jeeda beelaha ku hubeysan Muqdisho.
Dilka Axmed Dowlo ayaa waxaa ka qeybqaatay 15 qof, kuwaasoo ku hubaysnaa middiyo baangado iyo eebooyin, sida ehelada marxuumka ay ku warramayaan.
Muqdisho 17ka Oktoobar 2018 Taliska millitariga Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ku bur buriyeen Dooman ay leeyihiin Al-shabaab, Taliyaha ciidamada xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo arintan ka hadlayay ayaa yiri“Doonyo waxay sameysteen oo yar yar, oo biyaha ay uga kala gudbaan, doonyihii qaar waan gubnay qaarna gacanta ayaan ku dhignay, waxaa ay mar walba dhibaateeyaan shacabka beeraleyda ah, balse annaga kama yeeli doono arrintaasi, hawlgalada waxay ka socdaan qeybo badan oo ka mid ah gobolada dalka, waxaan dhawaan isku furnay wadooyin badan oo horey Shabaab ay go’doomiyeen”. Wuxuu sheegay in howlgaladan socda yihiin kuwo sida uu hadaalka u dhigay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciribtirayo deegaannada ay ka maamulaan gobolllada dalka Soomaaliya.
‘’Waad ogtihiin hadda gobolka Hiiraan jidad ayaa la furay, kuma ekaan doonno Hirshabeelle ee sidoo kale howlgalkan waxaa uu ka bilaaban doonaan Kismaayo, waxaa uu ka bilaaban doonaan Baay, iyo guud ahaanba deegaannada ay ku sugan yihiin Al-shabaab ayuu yiri taliyaha.
Ciidamada xoogga dalka ayaa laba jibaaray hawlgalada ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, waxayna dhawaan ku guuleysteen inay isku furaan wadooyin ay go’doomiyeen Shabaab, islamarkaana la wareegaan deegaano muhiim ah.
Maraykanka 17ka Oktoobar 2018 Madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump ayaa dhaliilay eedeynta soo kordheysa ee loo jeedinayo dalka Sacuudi Carabiya ee ku aaddan wariyihii la waayey ee Jamal Khashoggi.Trump oo la hadlay wakaalada wararka ee Associate Press shaley ayaa sheegay in aadan danbiile ahayn, illaa dambi lagugu helo, isaga oo u duurxulayo dadka Sucuudiga eedda loo jeedinayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arrinta Sucuudiga loogu eedeynayo wariyihi boqortooyada mucaaradka ku ahaa ee la waayey 2-di bishan ka dib marki uu galey qunsuliyada Sucuudiga ee Istanbul Turki, waxaa uu barbardhigey eedeymihii isku-deyga kufsi ee lagu soo eedeyey garsoorihi uu isagu u xuley maxkamada sare ee Mareykanka, Brett Kavanuagh oo warbaahinta caalamka mudo haysatey.
Wareysigan ayaa la siidayey ka dib marki uu Wasiirka Arrimaha Dibada ee Mareykanka, Mike Pompe uu la kulmey boqorka Sucuudi Carabiya, Salman ibnu Cabdicasiis iyo dhaxalsugaha, Maxamed Bin Salman, Wasiirka ayaa madaxda Sucuudiga kala hadlayey arrinta Jamal Khashoggi.
Inkastoo Mareykanku difaacay dowladda Sacuudiga, haddana dhinaca kale waxaa sii kordhaya cadaadiska caalamiga ah ee lagu hayo Boqortooyada Sacuudiga oo dhinaceeda wali ka war-wareeganeysa in ay bixiso tafaasiil rasmi ah oo la xariirta waxa ku dhacay Wariye Jamal Khashoggi.
Muqdisho 17ka Oktoobar 2018Xildhibaan Sharafeedka Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi uu bixiyey waxa uu kaga hadlay Arimaha Siyaasadeed Ee Dalka haatan ku jiro. Waxa uu sheegay in hormar badan ay Dawlada hadda jirta ay gaartay uusan isaga fursadaas helin sidaas awgeedna uu ku amaanayo.
Madaxweynihii Hore Ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Ayaa sheegay in Waxyaabaha lagu dhaliili karo Dawlada Farmaajo Hogaamiyo ay ka mid yihiin in Caburin ku heyso Mucaaradka Dawlada Aan Xilka ka heynin.
Waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud is dul taagay Mucaaradnimada sida ay utahay geedka la harsado oo kale in uu gallad kugu leeyahay sidaa awgeedna Mucaaradnimada ay Khaladaadka jira saxdo.
Madaxweyne Farmaajo iyo Mas’uuliyiinta Dawlada Hogaamisa Ayuu ugu baaqay inay dhageystaan Mucaaradada loo jeediyo oo wixii saxana ay ka qanciyaan kuwa dhaliilaya wixii iyaga ka khaldan loo soo gudbinaya ay iska saxaan.
Maxayse tahay sababata uu khaa’inul waddan Raysal Wasaare Mudane Xassan Cali Kheyre “Bakhti-Raam-Sade” uga baxay siyaaasaddii dhexdhexaadka ee arrimaha dibadda taasoo dhigaysay in dalka Soomaaliya u kala eexan waddamada Carabta sida #Sacuudiga, #Qatar